¸.•*´`*♥. ရင်ထဲမှာ ကဗျာပန်းတွေ ပွင့်လာရင် .♥*´`*•.¸(ကိုယ်တိုင်ရေးကဗျာများ) - Myanmar Online Tea Shop
Own Creation Poems
¸.•*´`*♥. ရင်ထဲမှာ ကဗျာပန်းတွေ ပွင့်လာရင် .♥*´`*•.¸(ကိုယ်တိုင်ရေးကဗျာများ)
Topic: ¸.•*´`*♥. ရင်ထဲမှာ ကဗျာပန်းတွေ ပွင့်လာရင် .♥*´`*•.¸(ကိုယ်တိုင်ရေးကဗျာများ) (Read 13857 times)
December 26, 2012, 11:14:29 PMReply #800 noel
Credit : 35576 $ View Inventory
Teashop PDF Team Re: ¸.•*´`*♥. ရင်ထဲမှာ ကဗျာပန်းတွေ ပွင့်လာရင် .♥*´`*•.¸(ကိုယ်တိုင်ရေးကဗျာများ)
ဒီနေ့နဲ့မနက်ဖြန်ကို ကျနော်တစ်ယောက်တည်းပိုင်ဆိုင်တယ်ဒါပေမယ့် ကျနော့်ရဲ့ အဲ့ဒီ့တစ်ရက်နဲ့တစ်ရက်က မတူညီဘူးဝင်လေနဲ့ထွက်လေကိုမှ အသက်ရှုပုံခြင်းက လုံးဝကွဲပြားတယ်သေချာစဉ်းစားရရင် ဒါ ကျနော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သံသရာပေါ့ဗျာ။အင်း ... ဂွကျကျအယူအဆနဲ့ ကပ်သပ်တွေးမယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာဆိုတာလည်း ပြားနိုင်သေးတာပဲ မဖြစ်နိုင်စရာရယ်လို့ မရှိဖြစ်ပြီးရင်ပျက်ရမယ်လို့ အားလုံးကို ဥပေက္ခာပြုထားလိုက်မယ်သင်္ခါရတွေ သင်္ခါရတွေ ... သြော် ... သင်္ခါရတွေ တဲ့လား။အနီဝတ် အပြာဝတ်နဲ့ အစိမ်းဝတ်တွေ .. ကုတ်အင်္ကျီအဖြူတွေအဖြူရောင်စာရွက်ပေါ်က အပြာရောင်လက်ရေးတွေ စာလုံးတွေ-300 -50 နဲ့ ဒီဂရီတွေ ဝင်ရိုးတွေ ဘာတွေမှန်းမသိ ဘာမှမသိသေချာတာက ငါ ...တဖြည်းဖြည်းသေဖို့နီးလာပြီ နီးလာပြီ ... ပဲ။သူက လိုချင်တာရအောင်ကြိုးစားကာမှ လက်လွှတ်ရတယ်တဲ့ကျနော်က လိုချင်တာတွေကို တမင်တကာ လွှတ်လွှတ်ချတယ်တကယ်တော့ ဆုံးဖြတ်ချက် မခိုင်မာသူ သတ္တိမရှိသူအဖြစ်သို့ကျနော် လွင့်ခဲ့ပေါ့ ....... မျောရင်း မျှောရင်း ဆက်လွင့်ရင်းနဲ့။တချို့ကဆုတောင်းကောင်းတယ် မွေးလာတည်းက ရေကန်အသင့်တချို့ကရုန်းကန်ရတယ် .. ဘာလို့ အားလုံးမတူညီကြရတာလဲတချို့မှာတော့ ကြာကိုတောင် မပွင့်နိုင်ရှာဘူး ..... ကံက နွမ်းလို့ ထားပါတော့လေ ..... ဒါကိုက လူ့လောကဆိုပြန်တော့လည်း။ဒီ အသက်အရွယ်ထိတော့ အဖေပင့်တင်ထားပေးတဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ဟိုး အမြင့်ကြီးရောက်အောင် ကျနော် တက်နေတုန်း လှမ်းနေတုန်းသူမျှော်လင့်တာက .. သူ နောက်ထပ် မပင့်တင်ပေးနိုင်တော့တဲ့အချိန်ကျနော်က ဘယ်လိုမှပြန်မကျနိုင်တော့တဲ့တနေရာမှာ ရောက်နေပါစေတဲ့။ဒီဇင်ဘာကလည်း တစိမ့်စိမ့် ... ကျနော့်ဆီမှာ ပူလို့ အေစီဖွင့်တဲ့အခါဖွင့်သူ့ဆီမှာတော့ နှင်းကျလို့ ခိုက်ခိုက်တုန်အောင်အေးရင်း Heat တွေဖွင့်ကမ္ဘာတစ်ခုတည်းမှာ ရှေ့ခြမ်းနဲ့နောက်ခြမ်းက မတူတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီကမ္ဘာကြီးဟာ တကယ်တော့ မြေပုံပေါ်မှာဆို သေးသေးလေးရယ်။နေသားမကျတဲ့မျက်လုံးက ပြင်ဆင်မွမ်းမံထားတဲ့ အကာအရံအသစ်နဲ့ရီဝေဝေ မူးလို့နေတယ် ... တဖြည်းဖြည်းတော့ ကျင့်သားကျဖို့ကြိုးစားရမယ်တကယ်ဆို အရက်မသောက်ပဲမူးတာ တော်တော်တန်တာမို့ ဒီတိုင်းနေသင့်တယ်ဘယ့်နှယ်လဲ ... ခင်ဗျားတို့ရော လက်ခံတယ်မို့လား .....................။
Cafe` Publisher EBook(PDF) List သံယောဇဉ်တွေ တစ်ရစ်ပြီးတစ်ရစ် တိုးလို့နှောင် ... ငါ့ကိုယ်ငါ ပြန်ပိတ်မိနေတဲ့ အကျဉ်းထောင်တဲ့လား December 31, 2012, 01:22:15 AMReply #801 nway yee pann
-Receive: 43Join Date: 30 Dec 2012
Credit : 150 $ View Inventory
Send $/Gift Gender: Re: ¸.•*´`*♥. ရင်ထဲမှာ ကဗျာပန်းတွေ ပွင့်လာရင် .♥*´`*•.¸(ကိုယ်တိုင်ရေးကဗျာများ)
ကောင်မလေးရယ်...ငါဟာ..မင်းကျွေးတဲ့ အိပ်မက်ထဲကစပျစ်သီးကိုသာချင်ခြင်းတပ်ခဲ့တာပါမရက်စက်ပါနဲ့ ကောင်မလေးရယ်မမီလဲ ချိုနေမဲ့အသီးမို့ပါ........။ကောင်မလေးရယ်...ငါဟာ..မင်းပေးဖူးတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အပြုံးနဲ့ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်နေတာပါမရက်စက်ပါနဲ့ ကောင်မလေးရယ်...တတိယငါ မရှိနိုင်တော့လို့ပါ...။ကောင်မလေးရယ်..ငါဟာ..မင်းနဲ့ပတ်သက်ခွင့်လေးသာမျှော်လင့်မိသူပါမရက်စက်ပါနဲ့ကောင်မလေးရယ်...ပထမမြို့တော်ကို ငါမရောက်ဖူးသေးလို့ပါ....။ကောင်မလေးရယ်...ငါဟာ..ငါ့အသည်းကန်ထဲက(မင်းရဲ့) လရိပ်ကလေးနဲ့ကျေနပ်နှစ်သိမ့်နေသူပါ..မရက်စက်ပါနဲ့ကောင်မလေးရယ်....ငါ့ကမ္ဘာမှာ လတစ်စင်းပဲရှိတာပါ.......။ နွေရဲပန်း
« Last Edit: December 31, 2012, 01:25:05 AM by nway yee pann »
January 06, 2013, 06:06:07 PMReply #802 မိုးစက်ဖြူ
-Receive: 8258Join Date: 04 Mar 2012
Credit : 43142 $ View Inventory
Send $/Gift Country: Gender: ဘဝဆိုတာ တမာလိုခါးနေရင်တောင် ဆေးဖက်ဝင်အောင် ဖန်တီးယူနိုင်ရမယ်
Re: ¸.•*´`*♥. ရင်ထဲမှာ ကဗျာပန်းတွေ ပွင့်လာရင် .♥*´`*•.¸(ကိုယ်တိုင်ရေးကဗျာများ)
တောင်သူ့အတွေးမိုးရိပ်တို့ညိုညိုမိုးပြိုလုို့သည်းသည်းတို့လယ်ယာ သည်အရပ်မှာသီးထပ်ပြီပဲ..။ရွှေမိုးမည်းသည်းပါလေဝါကျွတ်မှာ ကထိန်ပန်းဝေဖို့ရွှဲလို့စိုစေ..။တို့လယ်မြေသီးနှံဝေစေရေးနွားညီနောင် သည်ထွန်တုံးနှင့်ရုန်းလိုက်မယ်လေး..။
မိုးစက်ဖြူ ပျော်ရာမှာ နေခွင့်ရဖို့အရေး delay ဖြစ်နေတော့ တော်ရာမှာပဲ ပျော်အောင်နေရတော့မှာပေါ့... ဘဝဆိုတာ ဒီလိုပဲလား.. January 06, 2013, 07:23:31 PMReply #803 noel
သူစိမ်းထွက်သွားပြန်လည်း လှည့်မကြည့်မမြင်ယောင်သို့ ဆောင်ရက်သည်ရှိပြန်တော့လည်း ဘေးဖယ်ထားမရှိသယောင် ရှောင်ခွာသည်သူစိမ်း ... သူစိမ်း ငါဟာ .. အစတည်းက သူစိမ်းပါပဲကွယ်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ရှိနေပေမယ့်လည်းသူစိမ်းဆိုတာက အချိန်တန်ရင်တော့သူစိမ်းဖြစ်သွားစမြဲပါ .. အဆုံးသတ် အဖြေတစ်ခုအဖြစ်သူစိမ်းဟာ သူတစ်ယောက်တည်းလမ်းတွေပေါ်မှာ အဖော်မဲ့လို့ ....သူ့ခြေထောက်ပေါ်သူ ....သူစိမ်းဟာ စိမ်းသူအဖြစ်နဲ့ဆက် ရပ် နေ ခဲ့ တယ် .........။
Cafe` Publisher EBook(PDF) List သံယောဇဉ်တွေ တစ်ရစ်ပြီးတစ်ရစ် တိုးလို့နှောင် ... ငါ့ကိုယ်ငါ ပြန်ပိတ်မိနေတဲ့ အကျဉ်းထောင်တဲ့လား January 08, 2013, 04:13:54 PMReply #804 မိုးစက်ဖြူ
ပန်းကောက်သူလမ်းတစ်လျောက်ပန်းကောက်ပါတဲ့ ပျိုကညာလှရာရာသီကာကုံးပါကွဲ့ပြုံး လဲ့ကြည်စွာ ..။မြ ဝါဝါလေဝေ့မှာ မြေခဆင်းပန်းခရေ ကြိမ်တစ်ခြင်းကသင်းပျံ့လေခြင်း။
မိုးစက်ဖြူ ပျော်ရာမှာ နေခွင့်ရဖို့အရေး delay ဖြစ်နေတော့ တော်ရာမှာပဲ ပျော်အောင်နေရတော့မှာပေါ့... ဘဝဆိုတာ ဒီလိုပဲလား.. January 09, 2013, 03:04:20 AMReply #805 မိုးစက်ဖြူ
ချစ်သူကြင်ခွင့်ကင်း၍ ဖြစ်ခြင်းရယ်မှိုင် ငင်ခိုင်ရနိုး လှမျိုးမာန်သီ ချုပ်ရီသွန်းထင့် မုန်းတမ်းရင့်ထည် လွင့်သည့်မကြင်နာစကား။ခင်ခွင့်နှင်း၍ သစ်ဆင်းရွယ်တိုင် ကြင်နိုင်ရနိုး ဆတိုးပြန်ချီ နှုတ်သီခွန်းဆင့် ထုံးတမ်းကျင့်မည် စွင့်မည့်အရှင်မှာစကား။ရင်နှင့်ရင်း၍ ချစ်ခြင်းငယ်ပြိုင် ယှဉ်နိုင်ရရိုး ကကြိုးဟန်ချီ လှုပ်လီရွှန်းတင့် ပြုံးပန်းဝင့်သည် တင့်သည့်သခင်ပါတကား။
မိုးစက်ဖြူ ပျော်ရာမှာ နေခွင့်ရဖို့အရေး delay ဖြစ်နေတော့ တော်ရာမှာပဲ ပျော်အောင်နေရတော့မှာပေါ့... ဘဝဆိုတာ ဒီလိုပဲလား.. January 10, 2013, 05:28:37 AMReply #806 မိုးစက်ဖြူ
လှသော ညများလမလင်းပေမင့်ညခင်းကဖြင့် လှတယ်ရှင်။ကြယ်သင်းဝင် နဂါးငွေ့တွေကတောက်ပတယ်ထင်။ ကြည့်ပါရှင်ကောင်းကင်မှာထင်ရဲ့မြောက်ပြင်မှာ ထင် - ထင်လှတယ်လမ်းပြကြယ်ကွဲ့ ...။ဖိတ်ဖိတ်လဲ့ ကိုယ်ရောင်ဝါနက်ပြာမှာ ငွေခြည်စွက်ပါတဲ့နှိုင်းမဲ့ ဝဠာ..။ အဇဋာမိုးတိမ်လွှာ နှင်းမြူကင်းကြယ်မင်းတွေ ကိုယ်ရောင်ဖြန့်လေတဲ့တုမဲ့ ညခင်း။
မိုးစက်ဖြူ ပျော်ရာမှာ နေခွင့်ရဖို့အရေး delay ဖြစ်နေတော့ တော်ရာမှာပဲ ပျော်အောင်နေရတော့မှာပေါ့... ဘဝဆိုတာ ဒီလိုပဲလား.. January 10, 2013, 05:43:39 AMReply #807 မိုးစက်ဖြူ
မိတ်ဆွေကောင်းညဦးလေပြည်ညင်းညက်စွေစဉ်ကောင်းကင်ယံထက် ပြိုး ပြက် လက် သည့်ညည့်၏ခြုံလွှာကမ္ဗလာသည်ည၏အဆင်တန်ဆာလော..။ ညည့်ဦးယံတိုင်းရေနွေးဝိုင်းတွင်မျှ ယှဉ် ရသထို သုတ ၌နှစ်ခြိုက်ကြည်မွေ့ဤဓလေ့သည်ည၏အဆင်တန်ဆာလော..။တွေ့ဆုံခဏကျွမ်းဝင် ကြစဉ်မမြင် အတိတ်ခွင့်လွှတ်စိတ်နှင့်မိတ်ကောင်း ဆွေရင်းငါ ရခြင်း သည်ဘဝ၏ အဆင်တန်ဆာ ကော..။
မိုးစက်ဖြူ ပျော်ရာမှာ နေခွင့်ရဖို့အရေး delay ဖြစ်နေတော့ တော်ရာမှာပဲ ပျော်အောင်နေရတော့မှာပေါ့... ဘဝဆိုတာ ဒီလိုပဲလား.. January 10, 2013, 09:28:58 AMReply #808 nway yee pann
ကတ္တီပါသခင်မသို့..ဆောင်း၏အလွန်ဥသြတွန်ကျူးမြေလူးရွက်ဝါကတ္တီပါ ပန်းတို့ဖူးလေရူးတို့ပျော်ရင်....သခင်ပြန်ရောက်ပန်းကြွေကောက်သည့်အခါ...သခင်မွှေးဖို့ပန်းလေးတွေသီကြံစည်ရည်စူးကြည်နူးဝမ်းမြောက်လွမ်းရင်းစောင့်မည်သခင် မရောက်မှာ စိုးမိသည်.....။(ကတ္တီပါပန်းလေးကိုမှ နမ်းမွှေးတတ်သည့် ဧပရယ်သို့) နွေရဲပန်း
January 13, 2013, 04:33:52 PMReply #809 မိုးစက်ဖြူ
တီ တစ်ကောင်၏ ဆန္ဒမြေနှစ်မြေသားမြေကိုစား၍မြေကြားမှာပျော်မြေကိုကျော်ကာမြေပေါ်မြေအောက်မြေကိုနှောက်ယင်းမြေသင်းကျစ်ကျန်မြေကိုအန်သည်မြေဆီပြန်လို့ ဖြစ်ပါစေ..။
မိုးစက်ဖြူ ပျော်ရာမှာ နေခွင့်ရဖို့အရေး delay ဖြစ်နေတော့ တော်ရာမှာပဲ ပျော်အောင်နေရတော့မှာပေါ့... ဘဝဆိုတာ ဒီလိုပဲလား.. January 14, 2013, 09:08:13 AMReply #810 မိုးစက်ဖြူ
မိုးညကောင်းကင်မှာ တိမ်တစ်သင်းကြယ်ကင်းပါတဲ့ ညအခါလဝါဝါ ကိုယ်ယောင်ဖျော့လေပေါ့ညှိုးလျော့ခွေရှာ ..။မိုးတိမ်လွှာပြိုလာတဲ့မြစ်တစ်စင်းရှစ်ခွင်မှာမှုန်ရီမှိုင်းဝေပါ့မိုးညမြင်ကွင်း။
မိုးစက်ဖြူ ပျော်ရာမှာ နေခွင့်ရဖို့အရေး delay ဖြစ်နေတော့ တော်ရာမှာပဲ ပျော်အောင်နေရတော့မှာပေါ့... ဘဝဆိုတာ ဒီလိုပဲလား.. January 23, 2013, 06:39:18 PMReply #811 Cobra
Credit : 1808 $ View Inventory
Send $/Gift Country: Gender: မှည့်ပြီး မကြွေ ... ကြွေပြီးမှ မှည့်။
"စိတ်, တေလေ"လူ့ဘဝဆိုတာတစ်ခုခုငတ်နေမှ ပီသတာလေ။အမှောင်ချထားတဲ့ လတစင်းလှစ်ပြူပြဖို့ ခဲယဉ်းတယ်။ဘဝက ရထားတစင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်အတက်အဆင်းများတဲ့ ဘူတာငါမရပ်တန့်ချင်ဘူး။ဝေးဝေးကို သွားနေရင်းနီးနီးလာတဲ့ ဆန်းလွန်းတဲ့ဒီခရီးအဆုံးမတိုင်ဘူးကွာ။ဖွဲမီးပြာကျ ဖြစ်နေရတဲ့သံစဉ်ပျက် ရင်ခုန်သံနဲ့ညစ်ထပ်နေတဲ့ ဘဝကိုဘယ်လောက်ပွတ်ချေလဲပြောင်ရောင်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဖာထေးရင်းစုတ်ပြတ်သုံးမရတော့တဲ့အဆုံးအရိအဆွေးခံ မြှုပ်နှံရုံပေါ့အနဲဆုံးတော့ ဒီကမ္ဘာမှာမြေဆီ သြဇာအဖြစ်ကျန်ရစ်ပါရစေလေ။နိုးတဝက် အိမ်မက်မျက်တွင်းဟောက်ပက်အိပ်ပျက်ညရဲ့သက်သေဟော .....အဲဒီ ... အဲဒီ ...အသက်ရူသံတချက်ကြောင့်အရာခပ်သိမ်း ပြီးပြည့်စုံတယ်တဲ့လေ....။
« Last Edit: January 30, 2013, 11:58:13 AM by Cobra »
" မှောင်နေတဲ့အခြမ်းက လတစင်း ... ဘယ်သူ့အတွက်မှ မထွန်းလင်းနိုင်ပါ "
January 29, 2013, 07:01:36 PMReply #812 royalrole
-Receive: 35Join Date: 05 Aug 2011
Credit : 143 $ View Inventory
ထင်သလောက်ဖြူစင်ပါရဲ့လားအဟက် . . . အီလန်မသုံးလိုဖြစ်မယ်စိတ်အညစ်အကြေးကိုဘယ်အစွန်းချွတ်ဆေးကများတတ်နိုင်ပါရဲ့လဲ ... အယောင်ရာဆီလူးပြီး ဘီလူးခေါင်းကိုသန်းရှာမိနေပြန်ကော ..... တစ်နေ့တစ်နေ့နဲ့အချိန်တွေကိုဝါးမြိုလိုက်တာအိမ်မက်အတုတွေဆက်မက်နေပြန်ပြီနားလိုက်စမ်း ... တကယ်လို မင်းစိတ်မပိုင်ရင်လာလာချည်းသေးရဲ့ အီကြာကွေးကနှစ်ချောင်းပူးဆိုတာ ကလေးတောင်သိတယ် အရည်ပျော်နေပါပြီဆိုမှတောက် !!!!ဒီနေကလည်းပူလိုက်တာ[/color]
January 30, 2013, 01:14:19 PMReply #813 royalrole
**** ကျိန်စာ *****ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတဲံဗရမ်းဗတာရင်ဘတ်တစ်ခုနဲ့ဝတ်လစ်စလစ်ညတွေဖြတ်သန်းလိုပေါ့မုသားချိုချိုတွေ အလွမ်းတွေ ထည်လဲသုံးရင်းငါမျက်နှာဖုံးတွေ ပြောင်းခဲ့ပေါင်းများပီတကယ်တော့ငါဟာသံသယအကြေးထိုးသူမယုံကြည်မှုများကိုယုံကြည်မိသူထိုအတူအချစ်ကျိန်စာသင့်သူ ....။Roy@l
February 05, 2013, 03:34:43 PMReply #814 mgtatkhaung
ထာဝရ သစ်လွင်နေရင် လောကကြီး ပျက်စီးတတ်ပါသည်
Credit : 846 $ View Inventory
Send $/Gift Country: Gender: အတက် ဟူသည် ထာဝရ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်
အချစ်စစ်*ရက်စက်တယ်လို့+အဆိုခက်ပေမယ့်စွန့်ရက်သည်က-အဖြေပါခင်....*သံယောဇဉ်၏အစဉ်မျှကို+သောက အဆိပ်တံဆိပ် ပမာ+မဖြေသာအောင်တစ်လွှာချင်း ခြွေ+တစ်ချပ်စီ ကြွေမှဝေနိုင်မယ်များ-ထင်သလား...ခင်*အချစ်များ၏...စွမ်းအား မျှကို+ဓန အလွှာဂုဏ် မျက်နှာနှင့်+ဆပ်ပြာ ပူဖေါင်း ပမာခိုင်မာမှုကင်း+အပျင်းပြေဆော့ကြွေတော့ ရွက်ကြင်+ဆင်မှ နံ့သာမခံသာတာတောင်+သစ္စာ စမ်းရေကြောမျောနေတယ်များ-ထင်သလား..ခင်*ခင်ရယ်......စွန့်ပစ်ခံ ဘ၀ခရေလို မလှပေမယ့်ဝေဒနာ အဖြစ်+သောက အစစ်နှင့်အချစ် သင်္ကေတ+ရွက်လှ ပမာအဆင်းသာရှိပြီး+ငုံ အာ အဆင့်တစ်လွှာတောင် မပွင့်တဲ့+နေသင့် ပန်းမို့ဆငိမြန်းရင် ဖြစ်ဖြစ်-စွန့်ပစ်ရင် ဖြစ်ဖြစ်အချစ်ဟာ-အချစ်ပါပဲ.....ခင်လို့။မောင်တက်ခေါင်........သူငယ်ပြန်နေပါသည်။ February 16, 2013, 02:47:00 AMReply #815 SO WHITE
အချိန်တန်တော့ အိမ်ပြန်ပြီဗျာ။ ဂွတ်ဘိုင်
-Receive: 49Join Date: 16 Feb 2013
Credit : 160 $ View Inventory
Send $/Gift Country: Gender: အချိန်တန်တော့ အိမ်ပြန်ပြီဗျာ။ ဂွတ်ဘိုင်
နေသားတကျ ဘ၀မှာဒဏ်ချက်တွေ ခဏခဏနဲ့တံလျှပ်ကို ရေထင်အမြင်မမှားရအောင်လမ်းပြပေးပါ ရှင်တော်ဘုရား။အစစ်အမှန်တရားနဲ့ခါးသီးမှု.တွေကြား ၀မ်းဝရုံ၊ မျှတရုံနေတတ် ကျေနပ်ခွင့်ပေးသနားပါ ရှင်တော်ဘုရား။နှုတ်က ဖွင့်ဟလက်က ချရေးထိရှထက်မြက်ဓါးလှံလက်နက်ပမာမဖြစ်လိုပါ ရှင်တော်ဘုရား။တောင့်တတိုင်းမရမျှော်လင့်တိုင်း မလွယ်ကြိုးစားတိုင်း မဖြစ်ညစ်ပေနေတဲ့ ဘ၀မှာနေတတ်သေတတ်ရုံအသက်ရှူ လမ်းလျှောက်ခွင့်ရရင်ဖြင့်ဒီဘ၀ နေပျော်ပါပြီ ရှင်တော်ဘုရား။ February 16, 2013, 09:37:14 AMReply #816 mgtatkhaung
ပြောဖြစ်မယ် ဆိုလျှင်*နိယာမ သီအိုရီ+မပီ ၀ိုးဝါးနှလုံးသားဝယ် -ဆင့်ပွား ပုံရိပ်လန့်ထိတ် ထိတွေ့- ဖြည်း ရွေ့ရွေ့နှင့်ဝိုက် ဝေ့ မျက်နက်- အိစက် လွန့်လူးနှင်းဆီဖူးတို့….အမြင်ဦး…ဆုံမိကြသည်ဝယ်..။ကွယ်……အရှိန် ပြင်းချင်- ငလျှင် တစ်ခုတုန်ခါ မှုဖြင့်-စုစည်းခွင့် ဗီဇနိုးထ ရွှေရင်…ဖိုချင်မိပြီ…။ကွယ်…..၀င်သက်မောဟိုက်-ထွက်သက်တစ်ရှိုက်မှာကြားလိုက် သလို- ချိုကို ချိုတယ်ပန်းကြို လှေလား……လိပ်ပြာလား…ဟင် ။ကွယ်….စိတ္တဇ ဗေဒ -ေ၀၀င့်စ အပြုံးနှလုံး ခုန်နှုန်းနှင့် -နားဆွဲလေး လှုပ်အရုံးမှာပိတုံး တောင်ပံနှင့် -လွန်းကြင်ငှက်…လန့်အပျံ ထင်တယ်နော်…..။ကွယ်….“အဖြေ တဲ့“မပြေနိုင် တဲ့လား..ဟင်မကြွေ ခိုင်တယ်ထားဦး -စကား ယစ်မူးရစ်တွယ် ဖူးသော-သောက ဆူးနှယ်မကြုံဖူးပေမယ့်-တွက်ရူး မိတာ အမှန်ပါ ။ကွယ်…..ပြက္ခဒိန် မှတ်တန်း- မင်စွန်း ကြက်ခြေရီဝေ ပင့်သက်-ရက်တွေ လတွေကြာလေစိုးမိုး-လန့်နိုး အိပ်မက် ပမာစိတ်လွန် နယ်သာ…ဖြေသိမ့်ရာ….။ကွယ်…..မ၀ံ့ လှိုက်ဖို-တရို တသေပန်းကြွေ တစ်ဖတ် -မှတ်မှတ် ရရနှင့်ရင် မဖြစ်မှန်း-သိစွမ်းတာထက်ရက်စက်ဖို့..လိုသလား..ကွယ် ။ကွယ်…..ပလုံ စီတတ်တဲ့ -ဘီယာ ရည်သာကဗျာ ဖြစ်ရင်….အချစ် ရွှေ…အချစ် ငွေ…အချစ် တွေ..အချစ် တွေလို့ရှာဖွေမှု အပြင်စား-နှလုံးသားနှင့်စွန့်စား ခေါ်မယ်…သိပါစေ ။ကွယ်….မာယာ လား?အလွှာ လား?စကား သင်္ကေတ -ဖြတ်စ ညှပ်စကိုဘ၀ ဖြစ်တည်မှု ရယ်လို့..အမည် နာမ -မှည့်ခေါ်ကြရင်တောင်အလှ ၀ိညာဉ်လွှင့်ပြီး…၀င့်ထည်မည့်…ပွင့်ညှာပါ ။ကွယ်….နှောင်ငင် ချင့်တွက် -အကြွေ ခက်ရင်လဲရက်.လ.နှစ် ဆိုတာ -ဖြစ်စဉ် ၀င်္ကဘာညှာတာ စူးနစ် -ရင်လွှာ ဆူးဖြစ်စေအချစ်သည် ကဝေ -အချစ်သည် နွေ..လို့ဆိုစေဦးတော့…ပုရစ်ဖူးဟာ…ရွက်နုပါကွယ် ။ကွယ်…..သံသယ အပြုံး -မျက်လုံး သက်မဲ့မငဲ့ညွတ်နိုင်တဲ့ -အားပြိုင်မှုဟာခုခံမှု အဖြေလား…ဟင်..တုံ့ပြန်မှု..အမွေလား…ဟင် ။ကွယ်….တစ်ခါတလေ -လ အမွေနှင့်ရွှေဖြစ်တတ်တဲ့ -သက်မဲ့ ဒြပ်ဟာချစ်တတ်ခြင်းကို -ပုံသွင်းမှု..မပြုတတ်ပါကွယ် ။ကွယ်….ဓါတ်ပုံ ဇာတ်ဝင်ခန်း -ပြက္ခဒိန် ဇာတ်လမ်းကိုမေ့စွမ်းနိုင်စေ -အကြွေသာဆိုခရေ ဟာ…ပန်းမျိုးပါ ။ကွယ်….နမ်းမိပြီမို့ -စီရီ အဆင့်ဝေခွင့် ရည်တူ -ခြွေ ချူ သည်ထားအမှား တသသ-ဘ၀ သယံဇာတလို့မျက်လွှာ အပိတ် -ခေါင်း တညိတ်ဟာယိုဖိတ်ခြင်း…အရိပ်ပါရယ် …။ကွယ်….သံစဉ်မဲ့ ရပ်ဝန်းမှာ လန်းပါစေ…ဝေနှင့်နွမ်းပါစေ….ကြွေနှင့် လို့တားခွင့် နှုတ်ဆိတ် -ရွံ့ထိတ် သိဂါင်္ရသောကဆိုတာ….ခြေရာ အတိတ်…လွမ်း နိမိတ်ပါ ။ကွယ်…..အချစ် သူခိုး-အဖြစ်ဆိုးနှင့်လန့်နိုး အိပ်မက်နှယ်…မျက်နက်ပြာ အငွေ့-နှင်းဆီမွှာ အတွေ့ကိုတိုးဝှေ့ စိမ့်ဝင် -ဒြပ်စင် အဖြစ်ဟ-လှစ် ဖွင့်ဆို -စိတ် အလိုကိုသီအိုရီ လော့ဂျစ်နှင့်..ခြွေပစ်နိုင်ဖို့…ခက်ပါတယ် ။သြော်…..သက်ရောက်မှုမှ -ထိရှ နာကျင်တစ်ပင် တစ်ခက် -တွယ်ယှက် ညှို့ငင်စိတ် လွင်ပြင်မှာ -မွေ့ကြင် တိုးညှင်းသံစဉ် သွင်းရင်း….ရင်ချင်း သိ၍…..ပြောအုံးမယ်….လို့ ။ မောင်တက်ခေါင်
March 09, 2013, 01:52:15 PMReply #817 တပို့တွဲ
Credit : 112544 $ View Inventory
Send $/Gift Country: Gender: မင်္ဂလာပါ။။။။
ရင်တွင်းနွေတကယ့်ကို အခါနွေရောက်ပြီ။ လမ်းထိပ်က ငုပင်အိုက ၀န်မပျက် အကွက်ညီညီ ငုပန်းတွေ ဆင်ဖို့ အသင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီ။အိမ်ရှေ့ကလမ်းကလေး ... ရွက်ဝါများ ရွက်နီများနဲ့ .... ဖွေးဖွေးလှုပ်ခဲ့ပြီ။နွေဆို...... လေဖြူး ဖြူးကလေး တိုက်ခတ်လှည့်စမ်းပါ။ ရင်ဘက်အဟောင်းထဲက နှလုံးသားအဟောင်းနဲ့ အကောင်းအတိုင်းရှိတဲ့ ကျနော့်အလွမ်းများ သယ်ဆောင်သွားပါ။တိုးတိုးကပ် ရယ်သံလွှလွှများ ...ေ၀၀ါးသွားလိုက်ကြသည်။ တိုးဖွဖွ သူ၏ထွက်ခွာခြင်း ကျောခိုင်းခြင်း ... ခြေသံများ ကျနော့်နားမဆံ့နိုင်အောင် ကြားရသည်။၂ယောက်အတူလက်တွဲဖူးသော လမ်းကလေး ရော်ရွက်ရောင်စုံများ အပြည့်။။။။။။။။ကျနော်တို့အကြား နွေရောက်ခဲ့လေပြီ။နွေ၏အလှများကြား စိန်ပန်းနီနီတို့ကို ကျနော်မျှော်ပါရစေ။နွေ၏လေထုကြား စပါယ်ရနံ့တို့ ကျနော်ရှာကြည့်မည်။နွေ၏ခမ်းခြောက်ခြင်းများထက် ကျနော် ပျော်အောင်နေကြည့်မည်။နွေ၏ပူလောင်ခြင်းတို့ ကျနော်နဲ့ တစ်သားတည်း ကျခဲ့သည်။ တပို့တွဲ (9.3.2013)
Cafe` Publisher EBook(PDF) List April 04, 2013, 04:08:16 PMReply #818 mgtatkhaung
ဖြေဆည် ကြည့်သူခေါင်းရင်းမှ သရဖီပင် စိမ်းစိမ်းပွင့်လွှာတွေ သိမ်းလို့ငြိမ်းချမ်းလု အစမှာပဲ..ပုစဉ်း ရင်ကွဲ တကောင်ကနွေ အလှကို အသိပေးသယောင်နဲ့ပူလောင်မှု ခွန်အားကိုဝေဒနာများစွာ ထည့်ချိန်ပြီး..အချိန်မှန် ရင့်ကျူးနေလေရဲ့……။နရီ စည်း မကိုက်စွာလောကနဲ့ လိုက်ဖက်တယ်လား…….အရွက် ပြာစိမ်းကြားလွမ်းသလား….တမ်းသလား…မသိသော်မင့်….အတင့်ရဲတာကတော့..အမှန်ပါ…။အာခြစ်အော်တတ်တဲ့ ..ပရိယာယ် မပါသော…သူ့သံစဉ်..နားယဉ်ချင်ပေမယ့်…သူကတော့…တကယ့် နွေသရုပ်..သ န္တာန်နဲ့အထီးကျန်…မကျန်ကို…မသိမိသူ…ငါ…တခါတခါတော့လဲ…..အနေသာကြီးပါပဲ…။အဲ….လောကထဲမှ……မှီ..တည်..ပတ်သက်မှုတွေဟာ…အညာ..မဟုတ်…အထာ..မဟုတ်…..ဇာတ်ရုပ်ရဲ့….သင်္ကေတ…….အော်….သူက…ဇာတ်ဆောင်ပဲ…လေ……။
April 04, 2013, 07:02:13 PMReply #819 ကေပိုး
နေ့စဉ် ကော်ဖီတစ်ခွက်နှင့် ဇိမ်နှပ်ရပါလို၏..
Credit : 3521 $ View Inventory
Send $/Gift Country: Gender: လူတိုင်းချစ်ခင်ရသော ကိုယ် ဖြစ်ရပါလို၏..
နင်နဲ့ငါ" ဒိန်း "ကောင်းကင်ပြိုကျတဲ့ အဖြစ်လားထန်းလက်ကာရတဲ့ အဖြစ်လားမြည်ဟီးသံက အန န္တအရင်းစစ်တော့ဖြစ်တည်တာကရင်ခွင်နက်က.. တုန်ဟီးသံညီမလေးရေတဲ့..ခေါ်နေသံတွေ ဝေဝါးခဲ့တယ်..မ' ဆိုတဲ့ ညင်သာသံလည်းနားထဲ လှည့်တောင် ခြေဦးမသန်းပြန်ဘူး..နင်နဲ့ငါနင်နဲ့ငါချိုမြိန်လွန်းလှတဲ့ စကားလုံးတွေစိန်စီထားတာတွေထက် လှတယ်..ပကာသနဆန်တာတွေထက် လှတယ်..မာနဟန်ပါပါတွေထက် လှတယ်..တခါတခါကျနင်နဲ့ငါကအိုအေစစ်တွေထက်.. အမောပြေတယ်တခါတခါကျနင်နဲ့ငါကလေနုအေးတွေထက်.. ပိုပမ်းပြေတယ်..တခါတခါကျနင်နဲ့ငါကရေချိုမွှေးတွေထက်.. ပိုအေးမြတယ်..ဘယ်သူတွေ.. ဘယ်ဝါ့အတွက်ဘာတွေ ဖော်ဆောင်နေပါစေ..ငါ့အတွက်တော့..နင်ဟာ..တကယ့်ကိုနင်နဲ့ငါ ပါပဲ..ကေပိုး7:30 PM.2.4.2013.
လူချစ်လူခင် ပေါများခြင်းဖြင့် ဘဝတွင် ပျော်ရွှင်ရပါလို၏
April 04, 2013, 07:06:55 PMReply #820 ကေပိုး
ရူးတယ်ရူးတယ်...ထူးမခြားနား ဇာတ်လမ်းက ဖို့..ထူးထူးခြားခြား ..ခေါင်းခါးခြေလက်..အသက်ဝင်အောင်..ငါ ကြိုးစားခဲ့တယ်..ရူးတယ်..ဖြစ်ချင်တိုင်းလည်းမဖြစ်တဲ့ ဘဝကို..ငါ့အတွက်၊ ငါ့ဖို့..အတင်းဖြစ်ညှစ်သံယောင်လိုက်ယူခဲ့တယ်..ရူးတယ်..အရိပ်တကြည့်ကြည့်အပင်ပျိုကရေလိုအပ်လို့ရေလောင်းပေါင်းတင် သင်ရုံမကမြေသြဇာပါ ကျွေးမိခဲ့တယ်..ရူးတယ်..ဂရုမမူကျောက်ခဲတုံးကခပ်သေးသေးလို့..ထင်ခဲ့မိလည်း..ခြေမကွဲအောင်..သည်းလှိုက်နာကျင် နေခဲ့ဖူးတယ်..ရူးတယ်..ရူးတယ်.. ရူးတယ်အော်ဟစ်ငိုကြွေးဆိုချင်သေးလည်း..အပူရုပ် ဟန်လုပ်ခပ်တင်းတင်းလည်းနေရလောက်အောင်..ငါရူးမိတယ်..ရူးတယ်..ရူးလို့ ရူးမှန်းသိနေနှင့်လည်းရူးပြီး ရူးကာနေရတာလည်း..နှစ်ခြိုက်မိကာ..နွံထဲ တိုးလို့..ငါ ဆက်ရူးတယ်...ကေပိုး7:00 PM.1.4.2013.
April 09, 2013, 07:55:17 PMReply #821 တပို့တွဲ
ကျနော့်အနား မိုးဖွဲလေးများ ကျလေပြီ...လေပြေလေးလည်း သော့လေပြီ...နွေရနံ့များ .... ပျောက်ကုန်ပြီ။ကျနော့်နံဘေး သူ့ခြေရာများ ပြားခက်နေသည်။ကျနော့်ရင်တွင်း ဂီတသံများ ဆူ ဆူ ညံ....ကျနော့် နှလုံးအိမ်ထဲ သူ့တေးညည်းသံများ စည်ကားခဲ့သည်။။။။။မိုးတို့ခြုန်းခဲ့သည်။ တထစ်ထစ်ဖြင့် ခြုန်းသည်းနေသည်။မိုးစက်တို့အောက် ပန်းတစ်ပွင့်ချင်း တစ်ပွင့်ချင်း .... လှမ်း၍၀င်ခဲ့သည်။မြက်ဖျားထက်မှာ မိုးစက်တို့ ဝေ့၀ဲလျက် နွေရက်များကို နှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ကျနော့် အသည်းများ တစ်ဆစ်ဆစ် နာကျင်လာသည်။ မိုးတို့ ပို ၍ ပို ၍ သည်း ခြုန်း လာလေသည်။ လေပြေညှင်းတို့ကြား နွေရနံ့များ ပျောက်နေလေပြီ။ကျနော့် ဒိုင်ယာယီလေးထက် သွေးရောင်များ စွေးစွေး နီလာသည်။ ကျနော့် ညာလက်တို့ အလိုလို လှုပ်ရှားခဲ့သည်။မိုးစက်များနဲ့ ကျနော် အတူတူ ကခုန်ကြမည်။ကျနော့်ပခုံးတို့ မိုးစက်များကြား အေးစက်မာကြောလာသည်။ ကျနော့်နှလုံးသားလေး နွေးနေသေးသည်။ နွေရနံ့ ကျန်သေးသည်။ ကျနော့်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး မိုးစက်များနှင့် ဖြူဖြူဖွေးလာသည်။ကျနော့်နှုတ်ခမ်းတစ်စုံလည်း ဖြူ စွတ် စွတ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ကျနော့် လည်ချောင်းမှ အသံများ ..... ဆွံ့အ တိတ်ဆိတ်နေသည်။မိုးခြုန်းခြင်း၊ မိုးသည်းခြင်းတို့ က ကျနော့်ကို မညှာတာခဲ့ပါ။ မိုးစက်များ .... ရွာနေတယ်.... ကျနော့်ရဲ့အနား ...... မိုးစက်များမှ လွဲ၍ .... အခြားမရှိခဲ့။ တပို့တွဲ (9.4.2013)
Cafe` Publisher EBook(PDF) List April 18, 2013, 08:08:02 AMReply #822 noel
နှစ်‌‌‌နှစ်‌ပြည့်‌* * * * * * * အသတ်‌အပုတ်‌အတိုးအ‌ဝှေ့အတိုက်‌အခိုက်‌အကွဲအပြဲအလဲအပြို...အဲ့ဒီ့အရာ‌တွေကြားငါတို့ကျခဲ့တဲ့ မျက်‌ရည်‌‌တွေရှိခဲ့‌‌စေတနာကြားက ‌ဒေါသ‌တွေ ရှိခဲ့မချနိုင်‌တဲ့ မာန‌တွေရှိခဲ့ဘာလိုလိုနဲ့ အချိန်‌တစ်‌ခုတာ့ ငါတို့ ‌လျှောက်‌လှမ်းရင်းဖြတ်‌သန်းခဲ့ပြီးပြီHappy birthday ပါ Teashop ‌ရေ နင့်‌က ငါ့ဘဝပါပဲ နင်‌က ငါ့အသက်‌ပါပဲ‌တော့ စိုင်းစိုင်း ‌အော်‌သလို မ ‌အော်‌ချင်‌ဘူးဒါ‌ပေမယ့်‌ ငါတို့တယုတယ နဲ့ ခံစားချက်‌ ‌ပေါင်းများစွာကြား နင်‌ ၂ နှစ်‌ပြည်‌ခဲ့တာ သတိရရင်‌ ‌ကျေနပ်‌ပြီP.S - ‌ဟေ့လူဒွ ခညားတို့ သတိရဖို့ ‌ပြော‌နေတာ ဘာ ‌ကြောင်‌ကြည့့့််‌‌နေတာလဲ ငိငိ ငိငိ !!!!!Yesterday 7:27 pmBy noel ‌တောက်‌တိုယ်‌မယ်‌ရ ‌ချောင်‌တစ်‌‌ထောင့်‌က ခပ်‌နုံနုံ ကာစတမ်‌မာ « Last Edit: April 18, 2013, 08:10:45 AM by noel »
Cafe` Publisher EBook(PDF) List သံယောဇဉ်တွေ တစ်ရစ်ပြီးတစ်ရစ် တိုးလို့နှောင် ... ငါ့ကိုယ်ငါ ပြန်ပိတ်မိနေတဲ့ အကျဉ်းထောင်တဲ့လား April 19, 2013, 12:55:19 AMReply #823 Dwarven Sniper
မျှစ်တို့ ၏ မာယာ..
Credit : 8468 $ View Inventory
Send $/Gift Country: Gender: Re: ¸.•*´`*♥. ရင်ထဲမှာ ကဗျာပန်းတွေ ပွင့်လာရင် .♥*´`*•.¸(ကိုယ်တိုင်ရေးကဗျာများ)
"ကျွန်တော့် နာရီလေးက ချောက်ချောက် လို့ မမြည်ဘူး"ခင်ဗျားသိလား..ကျွန်တော့်နာရီလေးက "ကောက် ကောက် " လို့မြည်တာ..စက္ကန့်တိုင်းလား ဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး..မိနစ်တိုင်းလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ဘူး..စိတ်လိုလက်ရရှိတိုင်းကောက်ကောက် လို့ကို မြည်နေတော့တယ်... သိုးမည်း
May 02, 2013, 10:25:17 PMReply #824 မိုးတိမ်ကဗျာ
အရာတိုင်းသည် တခဏတာ ဖြစ်တည်ကြသည်။
Credit : 2857 $ View Inventory
Send $/Gift Country: Gender: လုပ်ချင်ရာလုပ်ပြီး ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရင်အပြစ်မပုံချပါ
ထွက်မသွားနဲ့ မာယာ....နင့်ကို ငါ့သံယောဇဉ်နဲ့ ချည်နှောင်ငါ့ သစ္စာတရားနဲ့ ထုပ်ပိုးထားတယ်..။မေတ္တာနဲ့ ချစ်ခြင်းတို့ အတိလွှမ်းသောအိမ်ဂေဟာလေးကနေ နင် ဘယ်ကိုများ ထွက်သွားချင်ရတာလဲငါ့ရင်ကိုခွဲငါ့အိမ်မက်တွေ ရိုက်ချိုးပြီးမှတို့ရဲ့ ဘ၀တွေကိုပါ လဲဖြိုပြီးတော့မှထွက်သွားပါလေ...။ဒီလောက်လုပ်ရက်မယ်ဆိုတာ.......ငါမစဉ်းစားချင်ဘူးအိုကွာ....မဖြစ်နိုင်ပါဘူးး။ဒါပေမဲ့ ငါဘ၀မှာ မဖြစ်နိုင်တာတွေကပဲ ဖြစ်ဖြစ်လာတော့အဖြစ်မှန်ဆိုတာကြီးက ...သိပ်အဓိပ္ပာယ်မဲ့လွန်းတယ်...။(မိုးတိမ်ကဗျာ) Cafe` Publisher EBook(PDF) List ကိုယ်မှန်ပေမဲ့ သူများအတွက် မှားနေလို့ သူများက ပေးတဲ့ အမှန်က ကိုယ့်အတွက် မုသား ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ထိုမုသားတို့အတွက် ကျွှန်တော်တို့ ပြင်ဆင်ထားကြရလိမ့်မည်။